စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ရက်အတိုင်း ဓာတ်အားခ ပေးသွင်းခြင်း မရှိသော ကုမ္ပဏီများကို အရေးယူမည် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဓာတ်အားဖြန့် ဖြူးရေး တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လစဉ်ဓာတ်အားခများကို စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းပေးသွင်း ခြင်းမရှိပါက ဓာတ်အားခကောက်ခံခြင်းအား ပိတ်သိမ်းအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအ ဝေးတွင် အလုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့်၏ မြို့နယ် YESC နှင့် Franchise ကုမ္ပဏီများ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် စာချုပ်ပါအချက်အလက်များတွင် မည်ကဲ့သို့ တာဝန်ယူရသည်ကို ပြည်သူလူထုသိရှိရန် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာဖြင့် ချပြရန်အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ စသည့်မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာ ကျော်က အထက်ပါအတိုင်းထည့် သွင်းဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”Franchise ကုမ္ပဏီများကို ဝန်ဆောင်မှုအားနည်းပါက အ ရေးယူဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် လစဉ်ဓာတ်အားခများကို စာချုပ်ပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်းပေးသွင်း ခြင်းမရှိပါက ကုမ္ပဏီမှဓာတ်အား ခကောက်ခံခြင်းကို ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ လိုအပ်ပါက တရားစွဲဆိုအရေးယူ ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် Franchise ကုမ္ပဏီများ၏ဆောင်ရွက်မှုကို လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ထိန်းကျောင်းပေးနေ ခြင်းဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ကော် ပိုရေးရှင်းကိုယ်စား ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးမြို့နယ် အသီးသီးတွင် ဓာတ်အား ဖြန့် ဖူးရေးလုပ်ငန်း များကို Franchise တာဝန်ပေးခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများက မြို့နယ် ၁၄ ခုတွင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိ ရသည်။
Franchise ကုမ္ပဏီအရေအတွက် ၁ဝ ခုရှိပြီး ယခုတိုင် စာချုပ် မချုပ်ဆိုသေးသော ကုမ္ပဏီ လေးခုရှိကြောင်း သိရသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့်က ”စာချုပ်မချုပ်ရသေးတဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး စာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးကို တွန်းအားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကြီးဌာနထံ ထပ်ဆင့်တင်ပြပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဒေါ်နီလာ ကျော်က ဖြေကြားခဲ့သည်။ Franchise က ကုမ္ပဏီနှင့် ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး ရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့ ချုပ်ဆို သော စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များကို ပြည်သူတို့သိရှိရန်အတွက် ထုတ်ပြန်ထားရန်လည်း အစီအစဉ် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ရှေ့နေဟောင်း မိုက်ကယ်ကိုဟင်က အမေရိကန်သမ္မတသည် ''လူလိမ်'' ''လူမျိုးရေးခွဲခြားသူ'' ဟ?
ကညွတ်ကွင်းမြို့တွင် ရွှေထည်ပစ္စည်း လိုက်လံရောင်းချနေသူများကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထာ??
မုံရွာမြို့မှ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စပိဘုတ်၊ ဖိုက်ဘာဘုတ် ၂ဝ ကျော်ဖြင့် ချင်းတွင်းမြစ်အတွင??
လွတ်မြောက် အကျဉ်းသား တို့ ဘဝရှင်သန်နိုင်ရေး ကူညီပေးမည့် လက်ကမ်း စာစောင် အင်းစိန်ထောင် ရှေ့?
ခံစစ်ကစားခြင်းက ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း မော်ရင်ဟို တုံ့ပြန်